के विवाहले मान्छेको व्यक्तित्वमा बदलाब ल्याउँछ ? « Onlinetvnepal.com
के विवाहले मान्छेको व्यक्तित्वमा बदलाब ल्याउँछ ?
Published : 13 March, 2018 9:46 pm
मनोविज्ञहरुले विवाहले मानिसलाई सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट बनाउने भनेर पूर्ण निष्कर्ष निकालिसकेका छैनन् । तर विभिन्न अध्ययनहरुले भने विवाहपछि व्यक्तिको व्यक्तित्वमा भने सधैका लागि परिवर्तन आएको देखाएको छ ।
एक अलग व्यक्तिसँग सार्वजनिक रुपमा सगँसगै जीवन बिताउनलाई प्रतिबद्धता र भविष्यबारे केही योजना आवश्यक पर्छ भनेर सहजै अनुमान गरिन्छ । र, निश्चयनै एकै व्यक्तिसँग दिन र रात सम्पूर्ण समयसँगै बिताउन धैर्यता र कुटनीति पनि आवश्यक पर्छ ।
लाखौँ व्यक्ति प्रत्यक वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिरहेका हुन्छन् तर यस्तो बृहद स्तरमा हुने सामाजिक कार्यबारे अध्ययन भने उति भएको पाइँदैन । यसबारे सबैभन्दा राम्रो निष्कर्ष भर्खरै गरिएको एक जर्मनले अध्ययनबाट आएको छ । सो अध्ययनमा अनुसन्धानकारहरुले ४ वर्षसम्म १५,००० मान्छेको जीवन निगरानी गरेका थिए ।
६६४ सहभागीले सो अध्ययन अवधिमा विवाह गरे । यसले तिनको व्यक्तित्वमा विवाहले पार्ने असरबारे अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान ग¥यो ।
अध्ययनकर्ताले विवाह गरेकाहरुमा बाँकीे सहभागीहरुको तुलनामा बहिरमुखीपन र नयाँपन अनुभव गर्ने व्यक्तित्वमा ¥हास आएको पाइयो ।
फरक त्यति धेरै थिएन तर विवाहपछि व्यतिm बोरिङ्ग हुन थाल्छ भन्ने आम मान्यतालाई यसले थप बल प्रदान गर्छ ।
यो निष्कर्ष सन् २००० मा अमेरिकामा भएको अलि सानो स्तरको अर्को अध्ययनको निष्कर्षसँग समान रहेको छ, विशेष महिलाहरुमा । लगभग २००० अधबैशे सहभागीलाई छ देखि नौ वर्ष पछ्याइएर गरिएको अध्ययनका क्रममा २० महिलाले विवाह गरे भने २९ ले डिभोर्स गरे । विवाह गरेका भन्दा विवाह टुटाएकाहरुमा बहिरमुखी र नयाँपन अनुभव गर्ने व्यत्तित्वमा बृद्धी आएको थियो ।
सोही अध्ययनमा भर्खर विवाह गरेका पुरुषहरुलाई भने डिभोर्स भएका पुरुषको तुलनामा फाइदा भएको देखिएको थियो । तिनको एकाग्रमा वृद्धी र चिडचिडपनमा ह्रास भएको देखिएको थियो ।
विवाहित पुरुषहरुमा एकाग्रतामा बृद्धी भएको तथ्य चाँही स्वभाविक लाग्छ । विवाह गरेको वा लामो प्रेम सम्बन्धमै रहेकाहरुले थाहा पाउने कुरा भनेको सम्बन्ध टिकाउन पहिले कम होस् जाने कयैन कुराहरु एक्कासी महत्वपूर्ण विषय भइदिन्छ । त्यही बढेको महत्वका कारण जीवनका कयैन चीजमा बढी ध्यान दिन थालिन्छ ।
टिलवर्ग विश्वविद्यालयकी टिला प्रोन्कले नेतृत्व गरेकी डच मनोविज्ञहरुको टिमले यसको व्याख्या गरेको छ । विवाह टिकाउन आवश्यक दुई सबैभन्दा महत्वपूर्ण गुण भनेको आत्मनियन्त्रण(विवाहको निरन्तरताको लागि आफूलाई लागेको तत्काल भन्नबाट रोक्ने) र क्षमावान (जस्तो आफ्नो जोडीले गरेका स–साना गल्तीजस्तै कपडा यत्रतत्र फाल्ने वा विपरित लिङ्गी साथीसँग सामान्य जिस्कनेलाई बेवास्ता गर्ने) रहेछन् ।
यसका लागि अनुसन्धानकर्ताहरुले १९९ जना नवविवाहित जोडीहरु माथि अध्ययन गरेका थिए । विवाहको तीन महिना पछि तिनीहरु कति धेरै क्षमावान (यसका लागि सहभागीलाई आफ्ना जोडिले आफूलाई गलत देखाउँदा त्यो शैलीलाई माफी दिने गरेको अवस्थालाई रेट गर्न लगाइएको थियो ।) रहेको मापन गरियो । यसका साथै तिनको आत्मनियन्त्रण (जुन सहभागीलाई ‘म आवेग नियन्त्रण गर्न निपूर्ण छु’ मा रेट गर्न लगाएर मापन गरिएको थियो) पनि जाँचिएको थियो । सहभागीहरुलाई चार वर्षसम्म वर्षमा एक पटक यो प्रकृयामा सहभागी गराइयो ।
परिणामले सहभागीहरुमा अध्ययनको अवधिमा क्षमादिने गुण र आत्म–संयममा वृद्धी भएको देखाएको थियो । तथ्याङ्कका आधारमा भन्दा क्षमा दिनेमा वृद्धी मध्यम थियो भने आत्म–संयममा बृद्धी न्यून देखिएको थियो । तर प्रोन्क र उनको टिमले औल्याए अनुसार आत्म–संयममा देखिएको उक्त बृद्धी मनोपरार्महरुले दिने आत्मसंयममा बृद्धी गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुँदाको बृद्धी बराबर थियो ।
अर्को प्रश्न छ विवाहित पछि साँच्चै आत्मसन्तुष्टी बढ्छ त ?
यससम्बन्धमा भएको अध्ययनहरुको निष्कर्ष एकल रहेकालाई खुसी तुल्याउने खालको छ । आत्मसन्तुष्टी विवाहको केही समय बढेपनि यो एक वर्ष वा त्यसको वरिपरिको समय पुन शुरुकै अवस्थामा जति हुनेगर्छ ।
हुन त यो ठूलो संङ्ख्यामा गरिएको अध्ययनको सालोडोलो परिणाम हो तर कुनै एक व्यक्तिमा यी लागु नहुन पनि सक्छ । हामी अक्सर सुन्छौ फलानोमां असल लोग्ने वा स्वास्नी बन्ने गुण छ भनेर र यही धारणासँग मेल खाने हिसाबको निष्कर्ष केही अध्ययनले देखाएको छ । विवाह भएपछि व्यक्तिको खुसी उसको विवाह अघिको व्यक्तित्वमा भर पर्ने प्रमाणहरु भेटिएका छन् ।
एकाग्र र अन्तरमुखी महिला र बहिरमुखी पुरुषहरुलाई विवाहले दीर्घकालिन सन्तुष्टी दिने गरेको देखिन्छ । सायद विवाहपछिको जीवनशैली यी व्यक्तित्व भएको व्यक्तित्वलाई उपयुक्त हुने भएर होला । तर यस सम्बन्धमा उलेख्य अध्ययन भने हुन बाँकीनै छ ।
र, अन्त्यमा विवाहित जोडिहरुले लामो समयमा एक अर्काको गुण ग्रहण गर्छन् भन्ने आम मान्यताको सत्यता के हो?
कत्तिले लामो समय विवाह सम्बन्धमा रहेका जोडीहरुको बोलीचालीमा समानता देखेर त्यस्तो धारणा बनाएका होलान् । यो मान्यता यथार्थमा भने मिथक मात्र हो । मिचिगन स्टेट विश्वविद्यालयले १२०० विवाहित जोडीमा गरेको अध्ययनले यो मान्यतालाई पुष्टि गर्ने नगन्य प्रमाण भेट्यो । खासमा पहिलो त समान व्यक्तित्व भएकाहरु नै विवाह वन्धनमा बाधिने सम्भावना हुन्छ । र, धेरै नै फरक व्यक्तित्व भएकाहरु बिच विवाह भइहालेमा तीनको विवाह सम्बन्ध लामो समय नटिकेको देखियो ।
समग्रमा अध्ययनहरुले विवाहले व्यक्तित्वमा केही बदलाब ल्याउने देखाउँछ । त
र यसमा विवाहपछि आउने अर्को चरण अर्थात् वच्चाको जन्मले व्यक्तित्वमा ल्याउने उथलपुथललाई भने समावेश गरिएको छैन ।
विश्व सुन्दरी बन्ने भेनेसा पोन्सेले त्यस्तो के जवाफ दिएकी थिइन् की उनले शृङ्खला खतिवडालाई हराइदिइन् ?
विश्व सुन्दरीको फाइनल राउण्डमा के प्रश्न सोधिएको थियो, मेक्सिकोकी भेनेसाले त्यस्तो के जवाफ दिइन् र
आईजिपी खनालको चेतावनी: निर्मला प्रकरणमा दोषी पाइए संसदमा मेरो बर्दी खोलिदिनू !
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा आफू दोषी पाइए
दी भ्वाइस अफ नेपालका यी हुन् चार फाइनलिस्ट : कसले मार्ला ग्राण्ड फाइनलमा बाजी ?
रियालिटी शो ‘टिभिएस अपाचे दि भ्वाइस अफ नेपाल’ आइतवारको कार्यक्रमदेखि फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।फाइनलमा
बलिउडका यी ७ अभिनेत्रीहरू जसको यति महँगो मंगलशुत्र छ , मंगलशुत्रको मुल्य सुन्दा नै चकित पर्नुहुनेछ !
कुनै पनि महिलाको बिबाह भएको छ या छैन भन्ने कुरा उसले लगाएको मंगलशुत्रबाट थाहा हुन्
ग्यास सिलिन्डरमा आगो लागी हाल्यो भने के गर्नु पर्छ ! जानिराखौ
हिले पहिले मानिसहरुले दाउरा बाट आगो बाल्थिए भने समय र प्रबिधीको बिकास भए लगतै मानिसहरुले
पेटिकोट आन्दोलनबाट चर्चित सबित्रीको आक्रोश, न्यायाधिश पत्नीले आशुको व्यापार गरिन् (भिडियो सहित )
सावित्री सुबेदीले न्यायाधिसको श्रीमतीले बाटोमा आशुको व्यापार गरेको आरोप लगाएकी छिन । ललिता रावत नै
अण्डा खान जान्नुभयो भने सुगर, कलेजोको रोग लाग्न नदिने मात्र हैन थप यस्ता ७ फाइदा हुनेछन् ! सेयर गरौ
अन्डा अर्थात कुखुरा लगायत पन्छीको फूल प्रोटिनको उच्च स्रोत हो । अन्डा खानमा स्वादिष्ट मात्र
ग्यास सिलिन्डरमा आगो लागी हाल्यो भने के गर्नु पर्छ
पेटिकोट आन्दोलनबाट चर्चित सबित्रीको आक्रोश, न्यायाधिश पत्नीले आशुको व्यापार
अण्डा खान जान्नुभयो भने सुगर, कलेजोको रोग लाग्न नदिने
विश्व सुन्दरी बन्ने भेनेसा पोन्सेले त्यस्तो के जवाफ दिएकी
© 2018 Onlinetvnepal.com